Miocene Epoch: njirimara, geology, ihu igwe, flora na fauna | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n'ime oge nke oge ahụ Neogene ọ dịlarị Ogechi fue el Miocene. N’oge a, ọtụtụ ihe mere n’obodo na mbara igwe na nke bekee. Nnukwu mmụba na ọnọdụ okpomọkụ nwere ahụmahụ bidoro na tụlee wee jiri nwayọ na-arịgo. Nrị elu a na okpomọkụ butere mmepe nke ọtụtụ ụdị anụmanụ na osisi.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, geology, ihu igwe, ahịhịa na osisi nke Miocene.
3 Miocene ihu igwe
Oge a malitere ihe dịka nde 23 afọ gara aga wee kwụsị ihe dịka nde 5 gara aga. A gbanwere mgbanwe na ọkwa orogenic nke uto nke ugwu di iche iche. N'ihi ọtụtụ ihe ndị mejupụtara fosil, ọ ga-ekwe omume ịhụ na ọ bụ ọkwa nwere oke uto na ọkwa ndụ ebe enwere ụdị anụmanụ dị iche iche. Otu a bụ otu ahụ nwetara mmepe na ịbawanye ụba n'ọtụtụ mba.
N'ime oge Miocene, enwere ike ịchọpụta ọrụ ala ebe ọ bụ na enwere nnukwu ije n'akụkụ kọntinent ndị gara n'ihu na-akwaga n'ebe ha nọ Mgbagharị kọntinent. N'ụzọ dị otú a, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dị ugbu a ebe ọ nwere taa. E nwere ọtụtụ ndị ọkachamara na-ekwu na, site n'oge ahụ, ụwa enweela ihe nhazi dịka o nwere taa.
Otu n’ime ihe dị mkpa banyere mbara ala bụ nkukota nke mgbago ugwu nke kọntinent Africa na ala Arabian. Ihe omume a dị oke mkpa dị oke mkpa dịka ọ kpatara na mmechi nke otu oke osimiri ga-adịrịrị ruo ugbu a. Oke osimiri bu Paratetis.
N’oge a, ngagharị nke India akwụsịbeghị. Ọ hapụrụ njide na ịpị megide mpaghara Eshia. Nke a mere ka ugwu nke Himalaya na-etowanye elu ma na-akpụkwa elu dị elu. Na ala ala Mediterenian, enwere otutu ihe banyere okwu ndi ozo ugbu a bu ebe ndi ugwu kachasi amara karie taa
Miocene ihu igwe
Dịka anyị kwurula na mbido isiokwu a, ihu igwe nke oge a bụkarị ọnọdụ okpomọkụ dị ala. Nke a nwere ike na-amalite na n'ihi nke mmụba nke mmeba nke ice na okporo osisi abụọ. Mgbasa a ice mere site n'oge gara aga nke a maara dị ka Eocene. Fọdụ gburugburu kwesịrị inweta ọnọdụ ala mmiri kpọrọ nkụ n'ihi na ha enweghị ike ijigide mmiri. Cheta na iru mmiri bụ isi ihe na mmepe nke microorganisms na osisi.
Oge a nwere oke okpomọkụ dị otú ahụ adịteghị aka. Ma ọ bụ obere n'etiti Miocene ọ bụ mgbe ọnọdụ ụwa malitere ịbawanye nke ukwuu. A maara eziokwu a nke na-arịwanye elu okpomọkụ dị ka Ọnọdụ ihu igwe kachasị mma nke Miocene. N’oge a, ọnọdụ ikuku dị nwayọ nwayọ karịa ogo 5 karịa ogo ugbu a. Nke a pụtara na mbara ala ahụ enwetaworị mmụba nke okpomọkụ karịa ka ọ dị taa. Kaosinadị, oge maka mmụba a dị nwayọ nwayọ, na-enye ụdị oge ka hazie.
Mgbanwe ihu igwe zuru ụwa ọnụ anyị na-ahụ ugbu a na-arịwanye elu na ọkwa mmadụ. Nke a na - eme ka ndị dị ndụ enweghị ike ime mgbanwe maka ọnọdụ ọhụụ. N'ihi mmụba nke okpomọkụ na mbara ala, ọnọdụ ihu igwe dị jụụ nwere ike ịmalite.
Site n’ịzụlite ugwu ndị dị oké mkpa na ịdị elu, ọ rụrụ ya ọdịda ga-ebelata nke ukwuu. Ka Miocene na-aga n’ihu, ụwa dum tụgharịrị gaa ihu igwe oyi. Maka nke a, agbatịkwu oke ọhịa niile wee gbatịkwuo ọzara na tundras.
Imirikiti ụdị anụmanụ na osisi ndị dị na Miocene ka a hụrụ taa. Enwere ike ihu ya n'oge a niile nke dị adị oke mbelata nke oke ohia na oke ohia n'ihi mmụba nke okpomọkụ na ndọtị nke iru mmiri a kpọtụrụ aha n'elu. Ebe ọ bụ na mmiri ozuzo bụ ala na ala osisi na-ama imeghari ka mgbanwe ndị a.
N'oge oge Miocene ha malitere na-achịkwa ahịhịa na osisi ndị ọzọ pere mpe nke na-eguzogide ọgwụ ogologo oge ọkọchị. Otu n'ime ụdị ndị a bụ chaparral. N'oge a, angiosperms rụpụtara, nke bụ osisi ndị kpuchiela mkpụrụ.
Anụmanụ bụ anụmanụ kacha nwee oke n'oge Miocene. Ha nwere ike ịgbasawanye na oke ekele maka mgbanwe ihu igwe. Mmechi nke oke osimiri Paratetis sokwa na ya. Kindsdị anụmanụ dị iche iche ga-etolite, site na obere mkpịsị nta na nnukwu mammals dị ka ụfọdụ ndị mmiri.
Nnụnụ nwekwara nnukwu nkwanye ugwu n'oge a. Umu anumanu nke jidere oge bu ndi a:
Ọdịdị nke Gomphotherium (Kpochapu)
N'ime anụmanụ ndị na-a aụ mmiri, anyị nwekwara ike ịhụ na ha dị ọtụtụ na nna nna nke whale dị ugbu a nwere mmalite. N'ime ndị tolitere ma mepụta ọkachasị bụ ndị nọ n'òtù ndị na-eri anụ, karịsịa odontocetes. Anụmanụ ndị a bụ eze toro ogologo ruru mita iri na anọ. Ihe oriri ha zuru oke ma rie azu ndi ozo, skwid na ndi ozo nke otu otu.
Anyị ekwesịghị ichefu ihe na-akpụ akpụ. Anyị chọpụtakwara ọtụtụ ụdị anụ ndị na-akpụ akpụ nke mepụtara nke ọma. Naanị akụkụ dị nso nke akụkụ ugwu nke South America ka a hụrụ. Mmiri mmiri a na-agba mmiri bụ nke kachasị ukwuu. Ihe ochie n’egosiputa na mbe nke puru iru mita abụọ n’ogologo. Ọ bụ na nri na-eri anụ ya ma anụ oriri ya bụ amphibians na azụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, oge a dị mma maka mmepe nke ndụ niile dị na mbara ụwa. Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oge Miocene.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Miocene epoch